I-Filecoin: Uhlelo Lokugcina Lomthombo Ovulekile | Kusuka kuLinux
I-Filecoin: Isistimu Yesitoreji Esivulekile Esisetshenzisiwe
El Umthombo Ovulekile kuya ngokuya kuhambisana noma kuzuzisa bobabili, ngobuchwepheshe obudade be- IBlockchain futhi i Ezezimali Ezihlukanisiwe (DeFi).
Kungakho namuhla, sizohlola uhlelo lokusebenza oluhlobene lwe Umthombo Ovulekile, iBlockchain neDeFi, ovela emkhakheni we Izinhlelo zokugcinaucingo "Filecoin".
I-IPFS: Uhlelo lwefayela oluthuthukile oluneP2P neBlockchain Technology
Kodwa-ke, kwezinye izikhathi siphinde sashicilela mayelana vula izinhlelo zokusebenza zemiyalezo esezingeni eliphansi, iphephe kakhudlwana futhi isebenza kahle, ochungechungeni lwamabhulokhi nangamathuba okwenza imali noma ukusetshenziswa kwezezimali, njenge "I-Adamant, iJuggernaut, iSphinx nesimo".
Futhi, ngaphambi kokuphawula "Filecoin", Kubalulekile ukuqaphela ukuthi uhlelo lokusebenza noma ubuchwepheshe bomthombo ovulekile buhlobene kakhulu nolunye uhlelo lokusebenza olwalubuyekezwe kakhulu ngaphambilini ku-Blog, olubizwa «I-IPFS». Futhi lapho, ngesikhathi esiveza okulandelayo:
"... I-IPFS ingagcwalisa noma ifake esikhundleni se-Hypertext Transfer Protocol yamanje (i-HTTP), okuyiyona eyenza njengamanje ukudluliswa kwemininingwane efwini (iwebhu) ezingeni lomhlaba jikelele. Ngakho-ke, i-IPFS ihlose ukuguqula ukusebenza kwamanje kwe-Intanethi kusekelwe kumaseva aphakathi nendawo kube iwebhu esatshalaliswa ngokugcwele ngaphansi kweP2P Technology neBlockchain. Ukuze ube uhlelo lwefayela olusatshalaliswa, olunezinkomba namafayela, angaxhuma wonke amadivayisi wekhompyutha nokuqukethwe kwedijithali, emhlabeni jikelele, ngohlelo olufanayo lwefayela." I-IPFS: Ungayisebenzisa kanjani i-Interplanetary File System ku-GNU / Linux?
IPFS: Ifayela Elithuthukile le-P2P neBlockchain Technology
Futhi kulabo abanentshisekelo yokungena kuzinhlelo zokusebenza "I-Adamant, iJuggernaut, iSphinx nesimo", okushiwo ngaphambili, ungachofoza ukungena kwethu okulandelayo okuhlobene naleso sihloko:
1 I-Filecoin: Isistimu yesitoreji esisezingeni eliphansi yaseBlockchain
1.1 Yini i-Filecoin?
1.2 Futhi yini enye iFilecoin?
1.3 Kungani usebenzise futhi usebenzise iFayilecoin?
I-Filecoin: Isistimu yesitoreji esisezingeni eliphansi yaseBlockchain
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni we "I-Filecoin Foundation", ngubani inhlangano ezimele Kunikezelwe ekusekeleni "Filecoin"lokhu ubuchwepheshe bomthombo ovulekile noma uhlelo lokusebenza Kuchazwa njengo:
“I-peer-to-peer network egcina amafayela, enezikhuthazo zezezimali ezakhelwe ngaphakathi ukuqinisekisa ukuthi amafayela agcinwa ngokuthembekile ngokuhamba kwesikhathi. Inhloso kaFilecoin ukwakha isizinda esisezingeni eliphakeme, esisebenza kahle futhi esiqinile solwazi lwesintu. " Yini i-Filecoin?
Ngaphezu kwalokho, ngamagama anemininingwane eminingi futhi acacile, futhi kucatshangelwa ubudlelwano be- "Filecoin" con "IPFS" okulandelayo kungangezwa:
""Filecoin" con "IPFS" zingamaphrothokholi amabili ahlukene futhi ahambisanayo, womabili adalwe yiProtocol Labs.I-IPFS ivumela ontanga ukuthi bagcine, bacele futhi badlulisele imininingwane eqinisekisanayo, ngenkathi iFayilecoin yakhelwe ukuhlinzeka ngohlelo lokugcina idatha oluqhubekayo. Ngaphansi kwesakhiwo sokukhuthaza iFilecoin, amakhasimende akhokhela ukugcina idatha enamazinga acacisiwe okudilizwa nokutholakala, futhi abavukuzi bayakhokhelwa futhi baklonyeliswe ngokugcina idatha ngokuqhubekayo nangokuyikhombisa ngokufihla. ”
Ngamafuphi, kungashiwo ukuthi:
“I-IPFS iqondisa futhi ihambise okuqukethwe, kanti iFilecoin iyisendlalelo sokukhuthaza imininingwane. Lezi zingxenye ziyahlukaniswa: ungasebenzisa eyodwa ngaphandle kwenye, futhi i-IPFS isivele isekela izindlela zokuzihlelela noma zokuzidela zokuphikelela kwedatha ngamathuluzi afana ne-IPFS Cluster. Ukuhambisana phakathi kwe-IPFS neFilecoin kuhloswe ukuthi kungabi nabuthelezi ngangokunokwenzeka, futhi kulindeleke ukuthi kuguquke ngokuhamba kwesikhathi. " Buyini ubudlelwane phakathi kwe-IPFS neFoxcoin?
Futhi yini enye iFilecoin?
Kunikezwe, "Filecoin" ngaphandle kokuba yi- Iphrojekthi Yomthombo Ovulekile, kubuye kube IBlockchain neDeFi Project, inesici esilandelayo:
“Kuyiprothokholi nophawu, i-blockchain yayo esebenza ngaphansi kohlolo lwenoveli, olubizwa nge-Proof-of-Spacetime noma i-PoST), lapho amabhulokhi akhiwa khona ngabavukuzi abagcina imininingwane. Iphrothokholi yeFayilecoin inikeza insizakalo yokugcina nokuthola kabusha idatha ngenethiwekhi yabahlinzeki besitoreji abazimele enganciki kumxhumanisi oyedwa, lapho: Amakhasimende akhokha ukugcina nokukhipha idatha. Abavukuzi bathola amathokheni ngokunikeza isitoreji, okusho ukuthi, abavukuzi bathola amathokheni ngokuletha idatha. " Yini i-Filecoin?
Kungani usebenzise futhi usebenzise iFayilecoin?
"Filecoin" njengoba isixazululo somthombo ovulekile, ingasisiza ukuthi singanciki kwizixazululo zobunikazi, ezivaliwe nezokuhweba njenge I-DropBox y I-Mega kuma-Operating Systems ethu amahhala navulekile, njenge-GNU / Linux Distros yethu.
Okusho ukuthi, lokho "Filecoin" una inethiwekhi yesitoreji esabelwe phansi ngokususelwa ku ICadena de Bloques, ingathengwa noma inikelwe ngokuqasha, indawo yokugcina idiski (ifu).
Futhi ngenxa yalokho, abantu abathi beka isitoreji wakhe imininingwane yomuntu, nenye idatha ebalulekile ephathelene nanoma iyiphi inkampani. Imininingwane imane ihlale kuwebhu, isatshalaliswe futhi igcinwe ngokuhlukile amakhompyutha emhlabeni jikelele.
Ngeminye imininingwane nge "Filecoin" ungavakashela i- Iwebhusayithi esemthethweni, it iwebhusayithi ku-GitHub noma okulandelayo isixhumanisi esingavumelekile Mayelana nakho.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Filecoin», okuyi Uhlelo lwesitoreji esisezingeni eliphansi olususelwa ku-Blockchain kanye Nomthombo Ovulekile, futhi ngasikhathi sinye, kuyisibonelo esihle kakhulu sobumbano phakathi kwefilosofi ye Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile kanye ne I-Blockchain Technology futhi i Ithrendi yobuchwepheshe beDeFi, esesikhulumile ngayo ngaphambili; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Filecoin: Isistimu Yesitoreji Esivulekile Esisetshenzisiwe
I-Google ikhiphe ikhodi yomthombo ye-Lyra, i-codec ye-Android audio